Fiara mpitatitra zotra 172, mihazo an’Andoharanofotsy sy 67ha indray, no nivadika teny Soanierana akaikin’ny Gastro Pizza, omaly maraina tamin’ny 6 ora sy sasany. Mpandeha 6 no naratra ka nentina teny amin’ny HJRA avokoa.
« Vokatry ny fandehanana mafy no niteraka ny loza », hoy ny nanatri-maso. Nandray andraikitra avy hatrany ny Kaominina Antananarivo renivohitra, izay tsy nitaza-maso fotsiny intsony ny filalaovana ain’olona toy izao. « Vao ny alakamisy 18 aogositra no nisy ny fihaonana sy fanentanana nataon’ny CUA tamin’ireo kaoperativa sy mpamily rehetra mandalo an’Andoharanofotsy sy 67ha, izay niresahana indrindra ny tranga toy izao », hoy i Rabearisoa Alexandre, talen’ny kabinetran’ny CUA.
Naiditra « fourrière » ilay fiara.notsoahana ny taratasy fahafahany miasa. « hanohy ny fampiofanana atao amin’ireo kaoperativa sy mpitatitra ny CUA amin’ny alatsinainy 22 jolay sy talata 23 jolay ho avy izao, hisorohana ny faharatrana sy ny fahaverezana ain’olona, hifehezana ny gaboraraka », hoy ny talen’ny kabinetran’ny CUA.